स्वस्थ कपालको लागि हल्का शैम्पूका फाइदाहरू - कपाल
हल्का शैम्पूका फाइदाहरू
कपाल धुनु तपाईको आत्म-देखभाल प्रणालीको एक अत्यावश्यक अंश हो। सबै पछि, एक चहलते माने ताजा, उछालभरी छ, धेरै चमक संग र यो राम्रो लाग्छ यो महसुस गर्दछ। तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ कि नियमित शैम्पूहरू स्वस्थ कपालको लागि राम्रो हो, तर तपाईं पुन: विचार गर्न सक्नुहुन्छ। स्वस्थ कपाल कायम राख्नको लागि हल्का शैम्पू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ एउटा नियमित रासायनिक भन्दा जो प्राय: नियमित शैम्पूमा भेटिन्छ। शैम्पूमा प्रयोग हुने बिभिन्न सामग्रीहरू बारे सावधान हुनुहोस् र किनaहल्का शैम्पू महत्वपूर्ण छ।
त्यसो भए, के हो हल्का शैम्पू बीच भिन्नता र नियमित व्यक्तिहरू? आउनुहोस् पत्ता लगाऔं।
१ हल्का शैम्पू: हार्श केमिकल सामान्यतया शैम्पूमा फेला पर्दछ
दुई हल्का शैम्पू भनेको के हो?
3 हल्का शैम्पू: कन्डिसन एजेन्टहरू
चार हल्का शैम्पू: प्राकृतिक सामग्रीहरू
।। हल्का शैम्पू खरीद गर्दा कारकहरू विचार गर्न
। हल्का शैम्पू: लाभ
।। हल्का शैम्पू: सुविधाहरू
।। हल्का शैम्पू: उपयोग
9 हल्का शैम्पू: कुनै पू विधि छैन
१० हल्का शैम्पू: DIY विधि
एघार हल्का शैम्पूमा सामान्य प्रश्नहरू
हल्का शैम्पू: हार्श केमिकल सामान्यतया शैम्पूमा फेला पर्दछ
शैम्पूमा सामान्यतया धेरै हानिकारक सामग्रीहरू हुन्छन् जुन कुनै ध्यान नदिई जान्छन्। यी कठोर सामग्रीहरूले स्वास्थ्य जोखिम पनि लिन सक्दछ। यहाँ प्राय: फेला परेका सामग्रीहरूको सूची छ जुन तपाईंको लागि नराम्रो हुन्छन्।
सोडियम लौरेथ सल्फेट (SLES)
सल्फेट्सले खोपडीबाट सेबम हटाउन मद्दत गर्दछ। जबकि यो प्रभावी ढंगमा खोपडी बिल्डअप खाली गर्न मद्दत गर्दछ, यस सफाई एजेन्ट यति कठोर छ कि यो कपाल तार को क्षति गर्दछ तिनीहरूलाई भंगुर बनाएर र झगडा उत्पन्न गराएर। तिनीहरू पनि संवेदनशील scalps मा कठोर हुन सक्छ।
प्याराबेन्सले ब्याक्टेरियालाई प्रसाधन सामग्री र शैम्पूमा बढ्नबाट रोक्दछन्। यस संरक्षकलाई हर्मोन एस्ट्रोजेनको नक्कल गर्न भनिन्छ र स्तन क्यान्सर कोषहरूको बृद्धिलाई जोडिएको छ।
नुन (सोडियम क्लोराइड)
अन्यथा प्याकेजि onमा सोडियम क्लोराइडको रूपमा उल्लेख गरिएको, मूल रूपमा शैम्पूहरूमा बाक्लो स्थिरता कायम गर्दछ। यो घटक संवेदनशील scalps जलन र पनि योगदान गर्न सक्दछ कपाल झर्ने ।
ड्यान्ड्रफ घरेलु उपचारका कारण कपाल झर्छ
यो एक ज्ञात कार्सिनोजेन हो र पशु परीक्षणको बेला छालामा लीन हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।
खुशबूहरू रसायनको गन्ध लुकाउन प्रयोग गरिन्छ। सिंथेटिक रूपमा केहि रसायनहरू सुगन्धित शैम्पूहरू क्यान्सर, दम, वा कपाल झर्को निम्त्याउन सक्छ।
यो सिलिकॉनको एक प्रकार हो जसले उत्पादनलाई कपाल र टाउकोमा निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ, एक चम्किलो मानेको भ्रम प्रदान गर्दै, तर यसले वास्तवमा कपाल तानिरहेको छ। जब यो प्लास्टिक फिल्मले कपाल र टाउकोको छाला बनाउँदछ, यसले प्ोरसहरू अवरुद्ध गर्दछ, कपालले ओसिलो र पोषक तत्वहरूको अवशोषणलाई रोक्दछ, र साथै योगदान गर्दछ छाला जलन र कपाल झर्ने
सुझावहरू: यस्तो शैम्पूहरू खरीद गर्नबाट जोगिनको लागि संघटक सूची पढ्नुहोस्।
हल्का शैम्पू भनेको के हो?
एउटा हल्का शैम्पूमा कठोर रसायन हुँदैन, र टाउको र कपालमा नम्र हुन्छ। यसले कन्डिसन एजेन्टहरू समावेश गर्दछ जुन भित्र छैन नियमित शैम्पूहरू , यस विकल्पलाई एक राम्रो विकल्प बनाउँदै। यी शैम्पूहरूमा प्राकृतिक तत्त्वहरू पनि हुन्छन् जसले राम्रो कपालको स्वास्थ्य प्रबर्धन गर्न आवश्यक पोषकहरू प्रदान गर्दछ। उनीहरूको टाउकोको छालामा जलन हुँदैन कपाल झर्ने कारण ।
सुझावहरू: तपाईको कपालको चिन्ताका अनुसार हल्का शैम्पू छनौट गर्नुहोस्।
हल्का शैम्पू: कन्डिसन एजेन्टहरू
हल्का शैम्पू पोषणयुक्त हुनुपर्दछ र कपाल कन्डिसन खोपडीलाई प्रभावकारी रूपमा सफा गर्दा। कन्डिसन एजेन्टहरूको सूची तल खोज्नुहोस् जुनaको लागि बनाउँदछ राम्रो हल्का शैम्पू ।
ग्वार गम वा ग्वार
सुझावहरू: कम्पोनेन्ट लिस्ट पढ्नुहोस् पहिचान गर्नका लागि यदि शैम्पूमा यी सुत्रहरू छन् भने।
हल्का शैम्पू: प्राकृतिक सामग्रीहरू
यो महत्त्वपूर्ण छ कि हल्का शैम्पूले यस्तो सामग्री समावेश गर्दछ जुन स्काल्प्स पीएच सन्तुलनको सम्मान गर्दछ, पोषण प्रदान गर्दछ, र कपाल धुने बेलामा खोपडीलाई शान्त गर्दछ। प्राकृतिक अवयवहरूले यी तथा यस्तै धेरै फाइदाहरू प्रदान गर्दछ, त्यसैले बढावा दिईदै हल्का शैम्पूको प्रभावहरू ।
प्राकृतिक तेल वा आवश्यक तेल
पूरकहरू जस्तै भिटामिन इ वा D
सुझावहरू: प्राकृतिक सामग्रीहरू अनुसन्धान गर्नुहोस् जुन कपालको लागि राम्रो हो र यसै आधारमा खरीद गर्नुहोस्।
हल्का शैम्पू खरीद गर्दा कारकहरू विचार गर्न
शैम्पूमा एसएलएस वा SLES जस्ता सल्फेटहरू हुनुहुन्न।
शैम्पू Parabens को मुक्त हुनु पर्छ।
सूत्रीकरणमा त्यहाँ कुनै संरक्षकहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन।
शैम्पूहरू त्याग्नुहोस् जसले सोडियम क्लोराइड प्रयोग गर्दछ।
सिलिकोनबाट पनि अलग रहनु पर्छ।
सुझावहरू: प्याकेजि on मा उल्लेख गरिएको घटक सूची जाँच गर्नुहोस्।
हल्का शैम्पू: लाभ
हल्का शैम्पूहरू तपाईंको कपालको स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छन्। तिनीहरूले तपाइँलाई तपाइँको कपाल सफा धुने अनुमति दिन्छ तपाईको कपाल सुख्खा वा चिन्ता बिना तपाईको टाउकोको छाला ।
TO हल्का शैम्पू प्रभावकारी रूपमा खाली टाउकोको निर्माण खाली गर्दछ।
यसले कपाल र ओसिलो स्लिप पट्टी गर्दैन तर वास्तवमा यसलाई सर्त गर्दछ।
यसले कपाललाई आवश्यक पोषक तत्वहरू प्रदान गर्दछ।
यो कपाल विकास बढावा दिन्छ ।
यसले टाउकोलाई शान्त गर्छ।
यो सबै कपाल प्रकारका लागि उपयुक्त छ।
संवेदनशील स्केल्पको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुझावहरू: हल्का शैम्पू हरेक दिन प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि आवश्यक छ भने कोमल छ।
हल्का शैम्पू: सुविधाहरू
जबकि घटक सूची नियमित र्याम्पू भन्दा रसायन प्रयोग गर्दछ भन्दा फरक छ, त्यहाँ केही भिन्नताहरू तपाईंले याद गर्नुहुनेछ जब तपाईं धुनुभयो हल्का शैम्पूको साथ कपाल ।
ड्राई खुजली महसुस नगरी टाउकोको छाला खाली गर्दछ
हल्का शैम्पूले यसलाई सुख्खा, खुजलाइ, वा कसले छोडे बिना हल्का छाला सफा गर्छ। यो पनि रूसीका कारणहरूमा मद्दत गर्दछ र कपाल झर्ने को रूपमा स्केलपको पीएच राखिएको छ।
चमक थप गर्दछ
पछि कपाल धुनु हल्का शैम्पूको साथ तपाईले याद गर्नुहुनेछ कि कपाल कोशाहरू सुख्खा नभई चम्किला छन्।
कसरी अत्यधिक कपाल झर्ने कम गर्न
एक मजबूत गन्ध छैन
कुनै रसायनिक गन्धमा थप कृत्रिम सुगन्ध थप्नको लागि धन्यवाद, यी शैम्पूहरूसँग धेरै हल्का गन्ध छ। सुगन्ध प्राय: प्राकृतिक अवयवहरूबाट आउँदछ।
धेरै मोटा स्थिरता छैन
किनकि त्यहाँ शैम्पूलाई गाढा बनाउन नुन जस्तो कठोर सामग्रीहरू छैनन्, हल्का शैम्पूहरूमा पातलो तरल स्थिरता छ।
धेरै लेथर गर्दैन
प्रयोग गरिएको सफा गर्ने वस्तुहरू हल्का छन्, त्यसैले उनीहरूले अधिक काम नगरी काम गर्छन्, त्यसकारण सफा गर्दा कन्डिसन।
सुझावहरू: हल्का शैम्पूको लागि अप्ट गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग ड्यान्ड्रफ पनि छ किनकि यसले स्क्याल्पलाई सफा गर्न र समस्यालाई दोहोरिनबाट रोक्नको लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्दछ।
हल्का शैम्पू: उपयोग
यो तपाईंको कपालमा कठोर नभएकोले, हल्का शैम्पू प्राय: आवश्यकताको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईंलाई पनि कपाल नुहाउन कम पानी चाहिन्छ शैम्पूको स्थिरता पातलो छ र यो पनि पछि ल्याउछ कम। तपाईलाई सबै आवश्यक छ लागू गरिसकेपछि केहि बूँदाहरू भिजेको कपालमा शैम्पू राम्रो लाथर काम गर्न।
तपाईं या त कन्डिसनरको साथ अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईंको कपाललाई आवश्यकता नभएमा यसलाई छोड्न सक्नुहुनेछ, किनभने हल्का शैम्पूहरू पनि कन्डिसन रहेको छ।
सुझावहरू: शैम्पूको मात्रामा बेकिंग सोडाको एक चम्मच जोड्नुहोस् तपाईंले आफ्नो कपाल धुनुहोस्। यसले अझ धेरै लेथर निर्माण गर्दछ।
हल्का शैम्पू: कुनै पू विधि छैन
धेरै बिरामीहरूको प्रकाशमा नियमित शैम्पू को प्रभाव , हानिकारक सामग्री, प्रयोग गरिएको साथसाथै यसले कपालको स्वास्थ्यमा हुने नोक्सानीको साथ, र समग्र स्वास्थ्य जोखिमहरू, 'No Poo' विधि लोकप्रियता लिन थाल्छ। 'No Poo' मूल रूपमा कुनै शैम्पूको अर्थ हुँदैन र यस विधि अनुसरण गर्ने व्यक्तिले वैकल्पिक विधिहरू प्रयोग गर्दछन् आफ्नो कपाल प्राकृतिक सामग्री वा सादा पानीले मात्र धुने। केश धोउन प्रयोग हुने यी प्राकृतिक विधिहरू पनि बनाउँदछन् उत्कृष्ट हल्का शैम्पू प्रभावी र प्रभावकारी सामग्रीहरू।
स्थायी रूपमा अनुहारको कपाल हटाउनुहोस्
सुझावहरू: बेकिंग सोडा संग स्याउ साइडर सिरका कपाल धुने उत्तम कुनै पू विधिहरू मध्ये एक हो।
हल्का शैम्पू: DIY विधि
यस नुस्खाको मद्दतले आफ्नै हल्का शैम्पू सिर्जना गर्नुहोस्।
१/4 कप डिस्टिल्ड पानी
१/4 कप तरल कास्टिल साबुन
१/२ चम्मच जोजोबा तेल
Drops ड्रप्स पेपरमिन्ट आवश्यक तेल
Drops बूँदाहरू चिया रूख आवश्यक तेल
मिक्सिंगको कचौरामा सबै सामग्रीहरू मिलाउनुहोस्, त्यसपछि यसलाई एक बोतलमा हस्तान्तरण गर्नुहोस्। तपाईंको कपाल धोउन यसलाई नियमित शैम्पू जस्तै प्रयोग गर्नुहोस्।
सुझावहरू: तपाईं आफ्नो मनपर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ यस शैम्पूको लागि आवश्यक तेलहरू ।
हल्का शैम्पूमा सामान्य प्रश्नहरू
Q. कसरी हल्का शैम्पूले डन्ड्रफलाई रोक्न मद्दत गर्न सक्छ?
TO जस्तो कि हल्का शैम्पूले टाउकोको छाला सफा गर्छ र यसको पीएच सन्तुलन कायम गर्दछ खोपडी स्वस्थ छ र चिडिदैन। नियमित प्रयोगमा डन्ड्रफ सफा, मॉइश्चराइज्ड, र स्वस्थ टाउकोमा देखा पर्दैन। अवस्थित डन्ड्रफको उपचार गर्न, हल्का शैम्पूहरू खोज्नुहोस् जुन चिया रूखको तेल वा लैभेंडर अत्यावश्यक तेल जस्ता प्राकृतिक सामग्री समावेश गर्दछ।
Q. के हल्का शैम्पू रंगको उपचार गरिएको कपालको लागि सिफारिस गरिन्छ?
TO हल्का शैम्पू निश्चित र color्गयुक्त कपालमा नियमित शैम्पू भन्दा नरम हुनेछ किनकि यसले रंगको धेरै भाग बाहिर निकाल्दैन। यो एक विकल्प हो यदि तपाईंसँग छैन रंग हेरचाह शैम्पू र हप्तामा एक पटक वा दुई पटक प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ, तपाई कुन रंग चाहानुहुन्छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ।
Q. हल्का शैम्पूले कसरी कपाल सफा गर्छ यदि त्यसले अधिक धेरै हेरचाह गर्दैन भने?
TO धेरै लाथरहरू काम गर्ने शैम्पूको सूचक मात्र होइन। हल्का शैम्पूहरूमा अलिकति लादर छ तर अझै स्फलप सफा गर्दै छन्। तिनीहरूले हल्का प्राकृतिक surfactants को उपयोग। यदि तपाइँ तपाइँको शैम्पू अधिक लाथर अप गर्न आवश्यक छ, केहि बेथर सोडा को साथ यसको प्रयोग गर्नुहोस् केहि लेथर प्राप्त गर्न।
निष्पक्षताको लागि घरको अनुहार सल्लाह
कसरी प्राकृतिक रूप बाट कपाल रोक्न को लागी
अनुहारको घरेलु उपचारमा फ home्गल संक्रमण
घरेलु उपचारमा स्थायी कपाल हटाउने
रूसीको लागि भारतीय घरेलु उपचार